Taxi - uhlobo oluthile ezokuthutha, esinikela zokuthutha ngabanye abagibeli noma izimpahla ezithile, kusukela iphuzu Ukuhamba, kwaze kwaba seqophelweni lokufuna ukuphindaphinda.
Yezinjongo eziyinhloko amasevisi taxi ekhona yilezi: umgibeli kwezidingo noma iyiphi ingxenye ofiselekayo komuzi nganoma isiphi isikhathi sosuku noma ebusuku, futhi esikhathini esifishane. Kodwa eduze Izinsiza, kunezinye imithetho eziningana - lena mahhala elincane service wetekisi, ephansi umgibeli umthamo, kungenzeka isevisi nenqaba, usongene isikhathi prepodachi futhi inani elikhulu labantu abathola lesi emthethweni, okunikeza ezingeni eliphansi inkonzo yayo (ekubeni ukufika sekwephuzile akuyona ekhelini ecacisiwe, tariff ephezulu isevisi). Kwakukhona ngisho izimo lapho kwakukhona ukuhlaselwa ku amakhasimende komshayeli.
Uma namanje angazi kanjani oda isevisi ezifana itekisi emzini omkhulu, kholwa kimi, lokhu akukona inkiyankiya yenkinga. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje ifoni noma pay iselula ukuze ushayele inombolo imisebenzi enjalo, futhi ukushiya dispatcher oda lakho (indawo yakho futhi isibalo abagibeli abafuna).
Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi inkonzo itekisi siqu ngokuvamile kwenziwe nge ukulindela ukuthi ngaphandle ezinye ukubambezeleka ngesikhathi endaweni efanele ngesikhathi esifanele. Ngakho nje kudingeka njalo acabangele khona futhi ukuhamba izimoto emadolobheni amakhulu (sezimoto kanye ukuminyana).
Uma sithatha isibonelo eMoscow, ukuze uthole wakhe aphume kolunye edolobheni komunye, uzodinga isikhathi esiningi eside isikhathi sokuphumula. Hhayi-ke, uma ezitaladini zalo ngeke sibe nalutho, futhi sizokwazi ukuba bahambe ngokukhululeka, kanti uma usebenza abasebenzela ke awazi ukufika ngaso kanye isikhathi endaweni ekufanele. Ngakho-ke, ukuze ugweme zonke izimo iwubuphukuphuku enjalo nje udinga ukuthatha itekisi (kuyinto efiselekayo ukwenza lokhu kusengaphambili), yenza isicelo ngocingo noma internet amasayithi.
Uma udinga oda itekisi ezishibhile ukuze sezindiza, esemgwaqweni endaweni eqhelile edolobheni, khona-ke kumelwe vele ukhethe kusuka ethize imithombo ulwazi taxi amafemu, ne amanani abaqotho kakhulu futhi ezingabizi kuwe, shayela dispatcher yabo futhi ushiye i-oda lakho.
Ukuze yakho udinga qiniseka ucacise isikhathi esiqondile nendawo lapho uya uthole. Oluphethe idatha efana, umshayeli uyakwazi thembeke ukubala indlela emfushane eya esikhumulweni sezindiza esiseduzane. Umshini akugcini nje ngesikhathi esifanele ugoduke, kodwa futhi phakathi nohambo ngeke ube nesikhathi eside ukuma esiminyaminyeni sezimoto futhi ngokuphuthumayo ungakhathazeki, ngoba uyamesaba emuva kwesikhathi ku indiza yakho emoyeni. Okunjalo zokuthutha inketho yakho kuyoba lesifanele kakhulu. Yebo, noma imuphi traffic ukubambezeleka ezincane kungase kube nemiphumela yenza ngokuphelelwa yithemba.
Yiqiniso, zikhona izimo ezingalindelekile, uma kudingekile ukuze abangele itekisi lokuqala etholakalayo ngokushesha. Kodwa uma ziye usebenzisa amasevisi we izimo eziphuthumayo okunokwethenjelwa futhi kungase kutholakale nguwe, ezinjalo ngeke abe isikhubekiso ngawe. Inkampani eyazisa idumela layo, uzama ukuthola nabashayeli abaqeqeshiwe kuphela (ochwepheshe), okuyinto ngokuphelele ngamakhasimende ezindaweni ezisemadolobheni, futhi ukwazi kanjani bawaletha ikhasimende ngangokunokwenzeka ngokushesha futhi ngokuphepha.
We ukweluleka lapho ukuya uphumule ehlobo
Kerry Japanese - izivakashi ezivela China